नेपाली समाजको वास्तविकता आज सम्म
नेपाली समाजले आज सम्म वास्तविकतामा मान्छेले मान्छेलाई सुईकार नगरेको अवस्था हो । १)लोकतन्त्रमा हरेक मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नै सुईकारेको हुन्छ २)श्रमको सम्मान गरेको हुन्छ । ३)समाजको स्वार्थको लागि एकिकृत भएको हुन्छ ।
हिमाल चढ्न आएका अमेरिकी नागरिक नेपालमा भारी बोकेर बसे ।।
वैशाख ५ – हिमाल चढ्न भनेर १८ वर्षअघि अमेरिकाबाट नेपाल आएका एकजना अमेरिकन जसले अहिलेसम्म पनि हिमाल आरोहण गरेका छैनन् । आरोहण गर्नै नसकेर भने होइन, हिमाल चढ्ने बन्दोबस्तीका सामान भरियालाई बोकाएर हिमालको आधार शिवीरतिर लम्कने क्रममै बिलाए उनको हिमाल चढेर हिरो बन्ने चाहना ।
धादिङ, वैशाख ४ – दुई महिनाको फरकमा बुबाआमा बित्नुभयो । साथमा साना साना दुई भाइ छन् । कहिले बुबाआमा खोज्छन्, कहिले खानेकुरा । छाप्रोमा बास छ । न लगाउने लत्ताकपडा छ, न त खानेकुरा ।
यसकारण फोक्सो र मुटुको दुस्मन धुम्रपान
मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोगमध्ये २५ प्रतिशत धुम्रपानका कारण हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत चुरोट सेवनले मात्र हुन्छ । ३० देखि ५० वर्ष उमेर भएका चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिलाई हृदयाघातको सम्भावना चुरोट सेवन नगर्नेभन्दा पाँचगुना बढी हुन्छ । नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसको प्रत्येक वर्ष सुर्ती सेवनका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । धुम्रपानको असर धुम्रपानले रक्तनलीको भित्री भागमा कोलेस्ट्रोल जम्मा गराउँछ । यसले रगतलाई बाक्लो बनाई जम्ने सम्भावना गराउँछ । मुटुको रक्तनली साँघुरो ब
जब मोबाइलमा ब्याट्रीको क्षमता सकिन्छ, तब ब्याट्री फुल चार्ज नभएसम्म हामी इलेक्ट्रिक चार्ज गरिरहन्छौँ । तर, ब्याट्री एक्स्पर्टहरूका अनुसार यो प्रक्रिया सरल भए पनि गलत छ । यदि मोबाइलफोनको ब्याट्री–लाइफ बढाउनु छ या ब्याट्रीलाई लामो समयसम्म टिकाउनु छ भने केही यस्ता टिप्सहरू अपनाउन सकिन्छः ब्याट्रीको लाइफ बढाउने उपाय मोबाइलको ब्याकग्राउन्डमा रन हुने एप्लिेकसनहरू अफ गर्ने । मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउन सकेसम्म वाइफाई प्रयोग गर्ने । मोबाइलको स्क्रिन सकेसम्म आफूलाई चाहिनेजति डिम बनाएर राख्ने । एनिमेटेड व
मंगोलियन फेसमा बढी डन्डिफोर
पभी गुरुङ स्किन प्रोफेसनल कोरियन स्किन क्लिनिक, बालुवाटार , तुलनात्मक रूपमा आर्यनलाई भन्दा मंगोलियनलाई डन्डिफोरले बढी सताउँछ । मंगोलियन स्किनमा डन्डिफोर बढी आउनुको कारण एउटै छ । स्किन प्रोफेसनल पभी गुरुङ भन्छिन्ः छालाभित्रको फोहोर तथा डेड सेल्स बाहिर निस्किन नपाउनु डन्डिफोर निम्तिने एक प्रमुख कारण हो । यो समस्या मंगोलियन स्किनमा बढी हुन्छ । किनभने मंगोलियनहरूको अनुहारमा रौँ निकै कम हुन्छ । रौँ उम्रिएको प्वालबाट छालाभित्रको फोहोर तथा डेड सेल्स बाहिर जान पाउने सम्भावना मंगोलियनमा निकै कम हुन्छ ।
राजिव कार्की, रामेछाप जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम रामेछाप बजारबाट करिव २ घण्टा दक्षिण तर्फ ओराले बाटो पैदल हिडेपछि पुगिने वादि गाँउ झटट् हेर्दा साच्चिकै मनमोहक छ । देशको लोपन्मुख जाती हायु, पिछडिएको कसाई समुदाय बसोबास रहेको वादिका स्थानियको मुख्य पेशा कृषि र मजदुरी हो ।
–जीवन श्रेष्ठ jiban2035@gmail.com संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी सन् १९९० डिसेम्वर १८ मा पारित गरी सन् २००० को डिसेम्वर ४ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आप्रवासी दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेदेखि महासन्धी पारित भएको दिन हरेक वर्षको डिसेम्वर १८ लाई विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको रुपमा उल्लासपूर्वक मनाउने गरिएको हो । नेपालमा भने यो दिवस सन् २००६ देखि मनाउन थालिएको हो । गत वर्ष झै यस वर्ष पनि सुरक्षित आप्रवासनको आवश्यकत
सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौती
दिपेश घिमिरे सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत शर्त पनि हो । वि.सं. २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो । यस ऐनले सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज नभएर सार्वजनिक चासोको विषय हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिक प्रति कति पार दर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सुचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्दछ । त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्
पुष्पलालाको जन्मभुमी भंगेरीको यात्रा ।
हिजो पुष्पलालाको जन्मभुमी भंगेरीको यात्रामा थिए । लगभग आधा घन्टा हिडेपछि पुष्पलालको जन्मभुमी भंगेरीको त्यो ठाउमा पुगे जाहा झाडीको एउटा कुनामा दुईओटा स–सना ढुगाँ देखिे तेहि हो रे पुष्पलालको मुर्ती । हेर्दा देखिन्थ्यो यो संरक्षण बिहिन भएर बसिरहेछ । संरक्षणको खाचो छ । महान हस्ती पुष्पलालले पुकारीरहेछ । मलाई संरक्षण देउ । त्यसपछि मनले नानाथरीका कुरा साच्न थाल्यो । की किन होला रामेछापको चिनारी र देशको माहान हस्ती पुष्पलालको संरक्षण नभएको किन होलो बर्षमा एक दिन उनलाई सम्झने फुर्सोद मिलेको ? यस्तै यस्त
सागर विक्रम बस्नेत–रामेछाप, भनिन्छ हरेक समस्याले अवसर लिएर आएको हुन्छ । बिनास पछि मात्र विकासको ढोका खुल्छ । भने जस्तै पैरो गएपछि गारो लगाउने चलन छ । कति चिज यस्ता छन् जुन आवश्यक छैन भईदिन्छ त्यस्तै । नयाँ वर्षको दुई हप्ता पनि पुरापुर बित्न नपाउँदै, समग्र देशवासीहरुको मुटुको धड्कन नै तेज गतिमा बढाउने गरी १२ गते मध्यान्ह १२ बजे महाबिनाशकारी भुकम्प गयो । यसले घर, जमिन, जगत, खोलानाला, पाखापर्वत मात्र हल्लाएन सरकार समेत हल्लाउन भ्यायो । भुकम्प गएको हप्तादिन सम्म सरकार के गर्ने र कसो गर्नेमा मात्र
भ्रष्टाचारको बदलिदो परिभाषा
गत मंसीर १९ गते व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको वैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले गम्भिर कुराको खुलासा गरे । कार्कीका अनुसार अहिले अख्तियारले एक हजार जना राजनीतिक व्यक्तिको बारेमा “इन्टेलिजेन्स सर्भे” गरिरहेको छ । तर त्यस्ता व्यक्तिले अहिले बैंकमा थोरै मात्र पैसा राख्दा रहेछन् । ससुराली र आफन्त पनि कंगाल नै हुदाँ रहेछन् । तर विदेश पढ्ने छोराछोरीले वैधानिक च्यानल